Eto ianao: Home / triatra / AIDA64 Latest Extreme Edition Full Version Crack with Product Key
AIDA64 Crack comes well packed in a 16mb installer with a well functional gửi. Manome tsipiriany momba ny fanazavana ny singa solosaina ny fitaovana toy ny rafi-miasa, motherboard, Multimedia, ary Network; manao fitsapana samy hafa mifandray amin'ny rafitra fahamarinan-toerana ihany koa. Tsy manana fomba roa ny fikarohana ny gửi, ny sakafo sy ny sary masina. Noho izany, raha bebe kokoa ny lisitra karazana olona, dia afaka mampiasa ny sakafo amin'ny ankavia. Ny lafiny ankavanana-tanana nentin-drazana mpampiasa interface tsara dia karazana sehatra varavaran'ny mpikaroka tany vaovao, izay manana be lehibe kokoa fampisehoana ny singa.
Ianao angamba tsy ho mampiasa fa miasa be izay tonga miaraka aminy. Na izany aza, dia fitaovana lehibe mba hahazo ny fanazavana momba ny rafitra na ny fitaovana amin'ny fipihana eo akory va ny sokajy. Ndao hoe raha te-hahita bebe kokoa momba ny solosaina, fotsiny ianao miditra ao amin'ny famintinana ary dia holazaiko aminareo ny zava-drehetra momba ny fitaovana singa, tahaka ny audio-lahatsary adaptatera, CPU ary afaka mihitsy aza miditra ao tsipiriany bebe kokoa momba ny fanavaozana ny mpamily. Noho izany, raha te-hijery ny mpamily rehetra noho ny fitaovana singa, dia misy toe-javatra ho anareo eo amin'ny anjan'ny. Azonao atao koa ny mijery ny Bios fanavaozam-baovao izay tena ilaina. Ny rindrankajy dia tsy mikendry isan'andro mpampiasa, fa dia natao bebe kokoa ho an'ny mpankafy PC sy ny mpitantana ny rafitra izay dia manome tena mora mahazo fitaovana maro amin'ny endrika voalamina.
Monitor Diagnostics: AIDA64 crack easily diagnoses all of your systems and provides almost all information on a hardware configuration that you require and shows you details on installed programs, rindrambaiko fahazoan-dalana, fiarovana fangatahana, ary Windows Fikirana. Izany ihany koa ny manamarina ny fahaiza-manao ny LCD.
System Stability Test: Manokatra ny toe-javatra nisy ny rafitra mifandraika na misy indro kely mety ho fikorontanana. Raha ara-dalàna ny zava-drehetra nihazakazaka ary tsy mandray misy hadisoana, dia ny PC dia milamina.
Mafana Stability Test: Izany dia maneho ny toe-solosaina avy amin'ny fanafanana fijery. Ho nahita ny kisary, ho azo antoka ny hafanan'ny motherboard tsy mihoatra avy 55-60 Celsius, ary ny CPU mari-pana avy 80 Celsius. Raha mitsangana avy ny ambaratonga, dia ny PC dia overheating.
fampitahana: AIDA64 crack tells you the data processing tasks and mathematical calculations and performance of your computer. Koa manadihady ny rafitra RAM passante sy ny latency. Azonao atao koa ny benchmark ny cache sy ny fahatsiarovana.
Favorites: Raha te-hahazo mora fahafahana hahazo ny fampiharana anao mihaja fotsiny dia afaka nanao azy tao an favoris.
Wi-Fi sy ny finday: Mitondra ny varavarankely Network aterineto, lalana sy ny vaovao rehetra momba ny navigateur tantara.
Storage: Milaza aminao ny fitehirizana ny Windows lojika aelin'ny, aelin'ny ara-batana sy ny angon-drakitra mahay voalamina amin'ny endrika.
fiteny: Ny AIDA64 rindrambaiko afaka mihazakazaka amin'ny fiteny isan-karazany dia ahitana Danoà, Anarana iombonana, Estoniana, anglisy, Rosiana,Sinoa, Tiorka, Okrainiana sy ny maro hafa.
manohana: Tsy manohana ivelany LCD, VFD, sensor biraom-pifidianana, sensor fitrandrahana sy ny Nampiomana ny, uptime sy haka aina amin'izay antontan'isa sy ny OSL tontonana. Milaza koa ny lamba sy ny fakan-tsary vaovao lafiny. Azonao atao koa ny manana biraonao Gadget raha tianao.
Download apk (rohy eto ambany).
Amin'ny fitaovana Android, any amin'ny fanova > fiarovana > mamela ny loharanom-baovao tsy fantatra.
Tadiavo alaina apk amin'ny findainao sy ny hametraka azy.
Nataon'i rehetra. Ankafizo!